Oligocene fauna: njirimara, ebe obibi na evolushọn | Network Meteorology
La Oligocene epoch bụ nke atọ na nke ikpeazụ nke oge ndị guzobere oge Paleogene nke oge nke Ogechi. Ọ bụ oge nke ụwa nwetara ma ọ bụ mgbanwe ọhụụ na ọkwa nke ndị dị ndụ na geology. Na Oligocene fauna O nwere ike ime nke ọma n'ihi mgbanwe dị mkpa nke ihu igwe nke kere ọnọdụ dị mma maka ụmụ anụmanụ na osisi ịba ụba.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile na mmalite nke oke Oligocene.
3.4 Ndị Cetace
Oge a malitere ihe dịka afọ 34 na-agwụ ihe dịka nde 23 afọ gara aga. N'ime oge a nile, mbara ụwa gbanwere mgbanwe ndị pụtara ìhè. Ihu igwe na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepe nke osisi na ahịhịa. Mgbanwe ndị a na mbara ụwa mere na ụmụ anụmanụ ga-ekesa onwe ha na ụwa dum.
Oligocene abụrụla oge ndị ọkachamara na-amasị mmasị n'ịmụ banyere oge ọmụmụ ebe ọ bụ na ha ewepụtala oge na mbọ zuru oke iji kọwaa ihe ndị zoro ezo. Oge Oligocene dị ihe dị ka nde afọ 11 na, n'oge a, mmegharị nke efere tectonic gara n'ihu, na-eru ọnọdụ yiri nke ha nwere taa.
Oligocene fauna bu onye ama ama dika amara ya dika umu anumanu. Ma ọ bụ na otu anụ nke mammals bụ nke nwetara ọtụtụ mgbanwe na ụdị dị iche iche n'oge a. N'ihi mmepe na mgbatị nke ụmụ anụmanụ, enwere ike ịmepụta nkewa ndị ama ama dị ka òké na ihe ọidsụidsụ. Ihe kachasị dị na geology nke oge a bụ Laramide orogeny na Alpine orogeny.
Banyere ihu igwe, ọnọdụ e ji mara oge a dị oke egwu. Emere ya site na oke okpomọkụ nke okporo osisi ndị ahụ ji ice kpuchie. Ego nke okpomoku zuru ụwa ọnụ gbanwere ụfọdụ usoro okike. Ka anyị tụlee ndụ ka mma.
A na-ahụkarị osisi Oligocene site na oke ọhịa coniferous nke jikọtara ọnụ na oke ọhịa. Ọhịa ndị a dị njikere ịnwụ maka okpomọkụ dị ala. Angiosperms bidoro gbasaa n'ọtụtụ ebe obibi, na-enwe nnukwu ngalaba.
N'ihi ihu igwe dị oyi, a na-ahụ mbelata nke oke ọhịa nke ahịhịa, nke ahịhịa na ahịhịa na ahịhịa na-edochi. Typesdị ụdị osisi dị iche iche aghaghị iche ihu ọrụ nke anụmanụ na-ata nri nke na-eri ha. Ka anyị nyochaa ihe ụmụ anụmanụ ndị a bụ.
Oligocene fauna bu ihe otutu otutu umu anumanu nwere ike ime ka ha di iche iche ma nwekwaa nsogbu n’agbanyeghi onodu ubochi nke achoputara ha. N'ime ìgwè anụmanụ ndị a dịgasị iche iche, anyị na-ahụ nnụnụ, anụ na-akpụ akpụ na anụmanụ na-enye ara. Fọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ Oligocene fauna afọ ụmụ anụmanụ. Ọ bụ maka oge nke Cenozoic era ihe ọzọ nwere ike ịba ụba n'ihe gbasara anụmanụ.
Onu ogugu umu anumanu ohuru putara, n'etiti nke anyi nwere mkpanaka, oria, primates na ndi ozo. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha.
N'ime usoro nke òké, anyị na-ahụ ọtụtụ anụmanụ ndị na-enye ara ara nke mepụtara n'oge Oligocene fauna. Njirimara ya nke nyere aka ịmata ọdịiche dị na ha na ndị ọzọ bụ ezé ezé dị nkọ nke nwere ọtụtụ ojiji. Otu n’ime ha bụ ịta mmadụ ma ọ bụ rie nkụ. Ezigbo ezinụlọ Oligocene nke òké bụ Eomyidae. Ha di ka ure taa ma ha nwere ahu di obere na omume arboreal.
Ha bụ otu ìgwè nke na-enye ara ara nwere akara nwere mkpịsị aka ise n’aka ha. Otu uru dị na mbara ala ndị ọzọ karịa anụmanụ ndị ọzọ bụ mkpịsị aka a na-apụghị ịgbagha agbagha. Na mgbakwunye, ha nwere ụkwụ akuku na-eme ka obo ụkwụ nile nwee ike ịkwaga. Nlekọta ezé ya n'ozuzu ya ma ọ bụghị ọkachamara. A na-ahụkarị primates ndị a n'oge a bụ lemur na tarsier.
Tarsier bụ nwanne nwanne ya nwere obere ihe ruru 10 centimeters. Njirimara ha bụ na ha nwere anya buru ibu nke na-eme ka ha gbanwee ọhụụ ha n'ọchịchịrị. Ha na-eriju afọ na viper ma nọrọ ọtụtụ oge kwụsịtụrụ na ngalaba nke osisi.
N'aka nke ọzọ, lemur bụ primate nke nwere ike ịdị iche na nha dabere na mpaghara ahụ. Otu n’ime ihe e ji mara ya bụ ọdụ ya toro ogologo. Ọdụ a na-adịkarị ogologo karịa ahụ dum. Anya ha buru ibu ma na-enye ha ohere ịhụ ọchịchịrị. Ha anaghị amata ọdịiche dị iche na agba ọ bụ ezie na ha nwere ike ịmata ọdịiche dị iche.
N'ime ihe enyemaka ha bụ ndị otu nke nkịta ọhịa wolf na nkịta. Njirimara ya bụ inwe ahụ dị ọkara ma na-ejegharị site na mkpịsị aka aka. Ha bụ nri na-eri anụ na ọtụtụ n’ime ha na-eri anụ. Ha pụtara na Eocene ma mechaa dị iche iche.
Ìgwè nke mammals nke kachasị nwee ike ime mgbanwe maka ndụ mmiri. Njirimara ya bụ isi ya ka emeziri ka ọ bụrụ ntù. Ntị azụ ha efuola ka oge na-aga. Mku ume ha bụ pulmonary, yabụ na ha kwesiri ịrị elu ugboro ugboro iji bulie ikuku.
N'oge ugbo oligocene otu n'ime ụmụ anụmanụ ndị kasị ukwuu n'ala mepụtara. A maara ya dị ka Paraceratherium. O nwere ihe ruru nha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita asatọ n’ogologo na mita asaa n’ogologo. Ha bu anumanu ahihia nwere ahihia nke oma. Ọ dịghị mmekọrịta ọha ma ọlị, mana ha na-ebi ndụ owu ọmụma. O doro anya na ha na-alụ ọgụ, na-agbagha isi ha ma na-echebe ha site na okpokoro isi nke okpokoro isi karịa nke nkịtị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ Oligocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oligocene fauna